1 Beresosɛm 6:1-81
6 Lewi+ mma ne Gerson,+ Kohat,+ ne Merari.+ 2 Kohat mma ne Amram,+ Yisar,+ Hebron,+ ne Usiel.+ 3 Amram+ mma ne Aaron+ ne Mose+ ne Miriam.+ Na Aaron mma ne Nadab+ ne Abihu,+ Eleasar+ ne Itamar.+ 4 Eleasar+ woo Finehas,+ na Finehas nso woo Abisua.+ 5 Abisua woo Buki; Buki nso woo Usi.+ 6 Usi woo Serahia; Serahia nso woo Meraiot.+ 7 Meraiot woo Amaria; Amaria nso woo Ahitab.+ 8 Ahitab woo Sadok;+ Sadok nso woo Ahimahas.+ 9 Ahimahas woo Asaria. Asaria nso woo Yohanan. 10 Yohanan nso woo Asaria.+ Ɔno na odii sɔfo, ofie a Solomon sii wɔ Yerusalem no mu. 11 Asaria woo Amaria.+ Amaria nso woo Ahitab.+ 12 Ahitab woo Sadok.+ Sadok nso woo Salum. 13 Salum woo Hilkia. Hilkia+ nso woo Asaria. 14 Asaria woo Seraia.+ Seraia nso woo Yehosadak.+ 15 Yehosadak yi na bere a Yehowa nam Nebukadnesar nsa so de Yuda ne Yerusalem kɔɔ nkoasom mu no, wɔde no kɔe no. 16 Lewi+ mma ne Gersom, Kohat, ne Merari. 17 Eyinom ne Gersom mma din: Libni+ ne Simei.+ 18 Kohat+ mma ne Amram,+ Yisar, Hebron, ne Usiel.+ 19 Merari mma ne Mahli ne Musi.+ Eyinom ne Lewifo mmusua sɛnea wɔn agyanom din te:+ 20 Gersom ba ne Libni,+ ɔno nso ba ne Yahat, ɔno nso ba ne Sima, 21 ɔno nso ba ne Yoa,+ ɔno nso ba ne Ido, ɔno nso ba ne Sera, ɔno nso ba ne Yeaterai. 22 Kohat mma no bi ne Aminadab, ɔno nso ba ne Kora,+ ɔno nso mma ne Asir, 23 ne Elkana, ne Ebiasaf,+ na Ebiasaf nso ba ne Asir; 24 ɔno nso ba ne Tahat, ɔno nso ba ne Uriel, ɔno nso ba ne Usia, ɔno nso ba ne Saul. 25 Elkana+ mma ne Amasai ne Ahimot. 26 Elkana mma no bi ne Sofai,+ ɔno nso ba ne Nahat, 27 ɔno nso ba ne Eliab,+ ɔno nso ba ne Yeroham, ɔno nso ba ne Elkana.+ 28 Samuel+ mma ni: N’abakan ne Yoel, na nea ɔto so abien ne Abia.+ 29 Merari mma no bi ne Mahli,+ ɔno nso ba ne Libni, ɔno nso ba ne Simei, ɔno nso ba ne Ussa, 30 ɔno nso ba ne Simea, ɔno nso ba ne Hagia, ɔno nso ba ne Asaia. 31 Eyinom na Dawid+ de nnwonto hyɛɛ wɔn nsa wɔ Yehowa fie hɔ bere a wɔde Apam adaka no kosii hɔ no.+ 32 Ná wɔyɛ asomfo+ a wɔto nnwom+ ahyiae ntamadan no anim kosii sɛ Solomon sii Yehowa fie no Yerusalem;+ na wɔyɛɛ adwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa no.+ 33 Eyinom ne wɔn a wɔsomee ne wɔn mma: Kohatfo mu, odwontofo Heman+ a ɔyɛ Yoel+ ba, Samuel+ ba, 34 Elkana+ ba, Yeroham ba, Eliel+ ba, Toa ba, 35 Suf+ ba, Elkana ba, Mahat ba, Amasai ba, 36 Elkana ba, Yoel ba, Asaria ba, Sefania ba, 37 Tahat ba, Asir ba, Ebiasaf+ ba, Kora+ ba, 38 Yisar+ ba, Kohat ba, Lewi ba, Israel ba. 39 Ná ne nua Asaf+ som wɔ ne nifa so. Asaf yɛ Berekia+ ba, Simea ba, 40 Mikael ba, Baaseia ba, Malkiya ba, 41 Etni ba, Sera ba, Adaia ba, 42 Etan ba, Sima ba, Simei ba, 43 Yahat+ ba, Gersom+ ba, Lewi ba. 44 Na wɔn nuanom Merari+ mma a na wɔwɔ wɔn benkum so no bi ne Etan+ a ɔyɛ Kisi+ ba, Abdi ba, Maluk ba, 45 Hasabia ba, Amasia ba, Hilkia ba, 46 Amsi ba, Bani ba, Semer ba, 47 Mahli ba, Musi+ ba, Merari+ ba, Lewi ba. 48 Wɔde nokware Nyankopɔn fie ntamadan mu adwuma+ nyinaa hyɛɛ wɔn nuanom Lewifo+ no nsa. 49 Aaron+ ne ne mma na wɔbɔɔ afɔre+ wɔ ɔhyew+ afɔremuka ne aduhuam+ afɔremuka so sɛnea akronkronne no ho adwuma nyinaa te; wɔde pata+ maa Israel+ sɛnea nokware Nyankopɔn akoa Mose hyɛɛ wɔn no nyinaa. 50 Aaron+ mma no bi nso ne Eleasar,+ ɔno nso ba ne Finehas,+ ɔno nso ba ne Abisua,+ 51 ɔno nso ba ne Buki, ɔno nso ba ne Usi, ɔno nso ba ne Serahia,+ 52 ɔno nso ba ne Meraiot,+ ɔno nso ba ne Amaria, ɔno nso ba ne Ahitab,+ 53 ɔno nso ba ne Sadok,+ ɔno nso ba ne Ahimahas.+ 54 Eyinom ne wɔn tenabea sɛnea wɔn nsase a wɔatoto ho afasu no te;+ Aaron mma a wofi Kohat+ abusua mu nam ntonto so nyaa wɔn kyɛfa. 55 Enti wɔde Hebron+ a ɛwɔ Yuda asase so ne ɛho mfikyisase a mmoa bedidi so nyinaa maa wɔn. 56 Na kurow no ho mfuw ne ɛho nkuraa+ no, wɔde maa Yefune+ ba Kaleb.+ 57 Na Aaron mma no, nkurow a wɔde maa wɔn ni: guankɔbea+ kurow Hebron,+ ne Libna+ ne ɛho mfikyisase, ne Yatir+ ne Estemoa+ ne ɛho mfikyisase, 58 ne Hilen+ ne ɛho mfikyisase, ne Debir+ ne ɛho mfikyisase, 59 ne Asan+ ne ɛho mfikyisase, ne Bet-Semes+ ne ɛho mfikyisase; 60 na Benyamin abusuakuw mu, wogyee Geba+ ne ɛho mfikyisase, ne Alemet+ ne ɛho mfikyisase, ne Anatot+ ne ɛho mfikyisase maa wɔn. Nkurow dumiɛnsa+ na wɔde maa wɔn mmusua. 61 Na Kohat mma a aka no nso, wɔnam ntonto so de abusuakuw no ne Manase abusuakuw fã no nkurow du+ maa wɔn. 62 Na Gersom+ mma no, sɛnea wɔn mmusua te no, wɔnam ntonto so de Isakar+ abusuakuw ne Aser+ abusuakuw ne Naftali+ abusuakuw ne Manase+ abusuakuw a ɛwɔ Basan no nkurow dumiɛnsa maa wɔn. 63 Merari+ mma no, sɛnea wɔn mmusua te no, wɔnam ntonto so de Ruben+ abusuakuw ne Gad+ abusuakuw ne Sebulon+ abusuakuw nkurow dumien maa wɔn. 64 Enti Israelfo de nkurow no ne ɛho mfikyisase+ a mmoa bedidi so maa Lewifo+ no. 65 Bio nso wɔnam ntonto so de Yuda+ mma abusuakuw ne Simeon+ mma abusuakuw ne Benyamin+ mma abusuakuw no nkurow a wɔabobɔ din yi mae. 66 Na Kohat mma mmusua no bi nyaa nkurow wɔ Efraim+ abusuakuw asase so. 67 Enti nkurow a wɔde maa wɔn ni: guankɔbea kurow Sekem+ ne ɛho mfikyisase a ɛwɔ Efraim mmepɔw so, ne Geser+ ne ɛho mfikyisase, 68 ɛne Yokmeam+ ne ɛho mfikyisase, ne Bet-Horon+ ne ɛho mfikyisase, 69 ne Ayalon+ ne ɛho mfikyisase, ne Gat-Rimon+ ne ɛho mfikyisase; 70 wɔde Manase abusuakuw no fã kurow Aner+ ne ɛho mfikyisase, ne Bileam+ ne ɛho mfikyisase maa Kohat mma abusua nkae no.+ 71 Na Gersom+ mma no, nkurow a wɔde maa wɔn ni: Manase abusuakuw fã no kurow Golan+ a ɛwɔ Basan ne ɛho mfikyisase ne Astarot+ ne ɛho mfikyisase; 72 ɛne Isakar abusuakuw kurow Kedes+ ne ɛho mfikyisase ne Daberat+ ne ɛho mfikyisase, 73 ne Ramot+ ne ɛho mfikyisase ne Anem+ ne ɛho mfikyisase; 74 ɛne Aser abusuakuw kurow Masal ne ɛho mfikyisase ne Abdon+ ne ɛho mfikyisase, 75 ne Hukok+ ne ɛho mfikyisase ne Rehob+ ne ɛho mfikyisase; 76 ɛne Naftali+ abusuakuw kurow Kedes+ a ɛwɔ Galilea+ ne ɛho mfikyisase ne Hamon ne ɛho mfikyisase ne Kiriataim+ ne ɛho mfikyisase. 77 Merari mma nkae no, nkurow a wɔde maa wɔn ni: Sebulon+ abusuakuw kurow Rimono+ ne ɛho mfikyisase ne Tabor ne ɛho mfikyisase, 78 ne Yordan a ɛwɔ Yeriko, de rekɔ Yordan apuei fam no, Ruben+ abusuakuw kurow Beser+ sare so ne ɛho mfikyisase ne Yahas+ ne ɛho mfikyisase, 79 ne Kedemot+ ne ɛho mfikyisase ne Mefaat+ ne ɛho mfikyisase; 80 ɛne Gad+ abusuakuw kurow Ramot+ a ɛwɔ Gilead ne ɛho mfikyisase, ne Mahanaim+ ne ɛho mfikyisase, 81 ne Hesbon+ ne ɛho mfikyisase ne Yaser+ ne ɛho mfikyisase.